Wargayska Le Parisien Oo Sharaxay Mid Ka Mid Ah Sababihii Keenay Cadhadii Kylian Mbappe Ee PSG Gilgilay. - Gool24.Net
Wargayska Le Parisien Oo Sharaxay Mid Ka Mid Ah Sababihii Keenay Cadhadii Kylian Mbappe Ee PSG Gilgilay.
Wargayska Le Parisien oo ka soo baxa dalka France ayaa iftiimiyay hal sabab oo ka mid ahayd waxyaabihii ka cadhaysiiyay Kylian Mbappe .
Kadib markii uu ku guulaystay abaal marinta xidiga sanadka horyaalka France ugu fiican, Kylian Mbappe ayaa madax xanuun ku riday maamulka kooxdiisa PSG kadib markii uu qirtay in uu kooxda ka bixi karo.
Waxaa tan iyo shalay lays waydiinayay su’aalo badan oo la xidhiidha waxyaabaha keenay in Kylian Mbappe uu waqti xaadirkan ku soo beegay hadalka bixitaankiisa iyo in uu soo gaadhay bar-badalkii waayihiisa ciyaareed.
Qaar ka mid ah warbaahinta ayaa hadalkii Kylian Mbappe ku qeexay in uu ahaa mid uu kaga niyadjabsan yahay xaalada PSG ee guul xumada Champions League halka kuwo kale ay u arkeen in uu heshiis cusub iyo lacag badan ku doonayay.
Laakiin arinta ugu badan ee laga hadlayay waxay ahayd in Kylian Mbappe uu fariin u dirayay kooxaha waa wayn ee doonayay in ay la saxiixdaan taas oo noqotay hadal hayntii ugu badnayd ee warbaahinta dunida.
Laakiin wargayska Le Parisien ee dalka France ka soo baxa ayaa arin ka duwan qodobadan soo bandhigay taas oo ah in Mbappe uu ka cadhaysan yahay macalinka kooxdiisa PSG ee Thomas Tuchel.
La Parisien ayaa shaaciyay in Mbappe uu ka cadhaysan yahay in Thomas Tuchel uu sabab cad u ahaa in uu seegay kabta dahabka ah ee gool dhalinta Yurub kadib markii uu ciyaarsiin waayay kulamadii Strasbourg iyo Nantes kuwaas oo uu Lionel Messi kaga fogaaday da’yarkan.
Kylian Mbappe ayaa si cad u sheegay in hamigiisu xili ciyaareedkan ahaa kabta dahabka ah isla markaana aanu seexan maalintii axadii ee uu Messi ciyaarayay si uu u daawado in uu goolal dhaliyo balse uu hurdada ku laabtay markii uu Messi laba gool dhaliyay.
Kylian Mbappe ayaa ka cadhaysan Thomas Tuchel taas oo uu La Parisien ku tilmaamay mid ka mid ah sababihii uu xaflada abaal marinaha fariinta uga dhex diray.
Thomas Tuchel ayaa cadaadis badan la soo kulmay kadib markii ay kooxdiisa PSG guuldaro wayni ka soo gaadhay Man United ee kulankii lugtii labaad ee Champions League taas oo cid kasta oo PSG ka mid ahi ay wali ka cadhaysan tahay.
Haddii ay tahay in la rumaysto Wargayska La Parisien, oo uu Kylian Mbappe ka cadhaysan yahay macalinkii Thomas Tuchel ayay taasi maamulka PSG u keeni kartaa in ay ka fiirsadaan arintan.
Kylian Mbappe Oo Ku Guulaystay Abaal Marinta Xidiga Sanadka Ee Horyaalka France Iyo Dhul Gariirkii Uu Maamulka PSG Ugu Abuuray Bixitaan Uu Iclaamiyay.
Xafladii uu Kylian Mbappe muranka ku abuuray
Kylian Mbappe ayaa soo dhaliyay 32 gool oo horyaalka France ah wuxuuna hadda arkayaa Messi oo 36 gool xili ciyaareedka ku dhamaystay balse waxa uu balan qaaday in halka kulan ee u hadhsan uu wax walba isku dayi doono si uu kabta dahabka ah ugu guulaysan karo.
Laakiin PSG oo warbixin ka soo saartay hadalkii Kylian Mbappe uu ku sheegay in uu bixi karo ayaa lagu cadeeyay in uu kooxda baaqi ku sii ahaan doono.
Thomas Tuchel ayay qasab ku tahay inuu ilaaliyo farxada Mbappe iyo Neymar Jr oo ah labada xidig ee ay inta guu badan maamulka PSG doonayaan in ay farxada ku dareemaan Paris si ay kooxda waqti dheer u sii joogi karaan.